आजको राशिफल (२०७४ आश्विन १९ गते बिहीबार/२०१७ अक्टोबर ०५) – Complete Nepali News Portal
आजको राशिफल (२०७४ आश्विन १९ गते बिहीबार/२०१७ अक्टोबर ०५)
October 4, 2017	472 Views
October 05, 2017 राशिफल
आजको पञ्चाङ्ग र राशिफल
आज वि.सं. २०७४ आश्विन १९ गते बिहीबार तदनुसार ई. सं. २०१७ अक्टोबर ०५ तारिख
आश्विन शुक्ल पूर्णिमा , उत्तराभाद्रा नक्षत्र, मीन राशिको चन्द्रमा, बृद्धि योग, विष्टि (भद्रा) र बब करण
आजको चाडपर्व र उत्सव : पूर्णिमा व्रत, कोजाग्रत व्रत, कार्तिक स्नानको प्रारम्भ, आकाशदीपदानको प्रारम्भ, योसमितवियगु (नेवारी पर्व), कत्तिपुह्नि, वृन्दावनमा शरदुत्सव, रास महोत्सव,
आजको मूहुर्त : दैलो राख्ने,
राहु काल : दिउँसो ०१:१९ देखि ०२:४८ सम्म
यमघण्ट : बिहान ०५:५८ देखि ०७:२६ सम्म
गुलिक काल : बिहान ०८:५५ देखि १०:२३ सम्म
काल वारवेला : दिउँसो ०२:४८ देखि ०४:१६ सम्म
रोग वारवेला : बिहान ०७:२६ देखि ०८:५५ सम्म
शुभ वारवेला : साँझ ०४:१६ देखि ०७:१६ सम्म
लाभ वारवेला : दिउँसो ११:५१ देखि ०१:१९ सम्म
परिश्रमको प्रतिफल ढिलो गरी प्राप्त हुनेछ । मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताको कदर हुनेछ । सामान्य कुरामा रुमलिनु राम्रो हुँदैन । दुरदराजमा रहेका आफन्तजनसँग सम्बन्ध कायम हुनेछ । जिम्मेबारी वहन गर्नु पर्नेछ, उत्साहपूर्वक काम गर्नुहोला । यद्यपि श्रममूलक काम र कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा भने सोचेअनुसार लाभ हुनेछैन, धनसङ्ग्रहका क्षेत्रमा बाधा भए पनि आम्दानीमा कमी हुनेछैन, घरमा अतिथिको आगमन हुनसक्छ । सार्वजनिक हीत र परोपकार क्षेत्रमा लगानीको समय छ, दानपुण्यबाट यश र सम्मान प्राप्त गर्न सकिने छ । नयाँ व्यवसायमा लगानी नगर्नु राम्रो हुन्छ ।
पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहने छ । सन्तति पक्ष र भाइबहिनीले खुसीको वातावरण सिर्जना गर्नेछन् । छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ । दाजुभाइको प्रगतिको समाचार सुन्न पाइन्छ । बौद्धिक क्रियाकलापमा दिलचस्पी जाग्नेछ, लेखन, प्रकाशन र ज्ञानगुनका क्षेत्रमा सक्रियता बढ्ने छ । प्राविधिक र सृजनात्मक सफलता मिल्नेछ । साथीहरूसित बौद्धिक र तार्किक विषयमा छलफल हुनेछ । व्यवसायिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ प्राप्त हुनेछ । मानप्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ । कल्पना, भावना र प्रेमिल वातावरणको उदय हुनेछ । प्रेमी/प्रेमिकाका बीचमा सामीप्यता बढ्ने छ ।